Ebe obibi obibi obibi na okomoko | Akụkọ Njem
3 obibi na okomoko ntụrụndụ
Mariela Carril | | ulo, njem
Enwere m ego anyaụfụ ma ọ bụghị maka ihe ha nwere ike ịzụta mana maka ahụmịhe ha nwere ike ibi. E nwere ebe naanị ego nwere ike ibuga gị na ebe ntụrụndụ ndị bụ kpakpando nke post anyị taa bụ ezigbo ihe atụ.
Imefu otu abalị n’ime ha na-efu nnukwu ego, hapụ naanị iri nri na iji ọrụ ha niile. Enweghị ego ọ bụla nwere ike imeli ha mana ha dị ma enwere obere ndị mmadụ n'ụwa nwere ike ịnụ ụtọ ha. Anyị nwere ike zute ha ma ọ dịkarịa ala n'oge oyi ma na-eche ugbu a banyere ezumike oge ezumike ebe a bụ atọ ebe obibi obibi na ebe obibi okomoko.
1 Panchoran ezumike
Ebe a dị na bali, n'etiti oke ohia ma di nso Ubud. Ihe owuwu ya sitere n'ike mmụọ nsọ ma ọ bụ otu n'ime ebe kachasị egwu site na imewe ahụ n'ihi na mputa anaghị adị iche na ime na nke ahụ dị ebube. E jiriwo ya wuo ya ihe na-adigide na ihe mejupụtara ya nwere ụlọ isii furu na achara.
Ngwongwo a buru ibu ma nwekwaa ala ndi Irish na onye mmebe ime Mara mma okpu. N'ezie, ọ bụ ụlọ nke ya, ruo mgbe ọ gbanwere ya ka ọ bụrụ ebe obibi. N'ịbụ nke achara kpaliri, o kpebiri na ya nwere ike iji ya mee ihe ọ bụla o kwere mee, ya mere, a na-ekwu na ụlọ ndị dị ebe a nwere achara karịa ụlọ ebe a na-ahụkarị ebe ọ bụ na ọbụna ala na efere ji achara. E nwere ihe dị ka ụdị achara 200 na echiche a bụ ịkwalite iji ya eme ihe dị ka osisi ọzọ na ije na ịchọ mma.
Isi ụlọ, Bale GedeO nwere ime ụlọ erimeri na ime ụlọ a na-emepe emepe nke meghere n'oké ọhịa ma jiri achara chandeliers chọọ ya mma. Onye ọ bụla nke Villas, na-akpọ Waterfall, Coco, achara, Osimiri Osimiri, na-ezu ugwu n’elu ahịhịa ndụ juru nke na-ahụ obere osimiri. Echiche ndị a na-atọ ụtọ nke ukwuu n'ihi na ha nwere mbara ihu. Fọdụ bụ otu ime ụlọ, ndị ọzọ ụlọ ihi ụra atọ na ụfọdụ nwere ike ịnabata mmadụ iri abụọ.
Esịtidem mma na-esochi shaby chic style nke a na-ewu ewu n'oge a: ngwakọta nke ihe mgbe ochie na nke oge a na-eme ka ime ụlọ dị mma: akwa ọcha ndị Alakụba na-acha ọcha nke nwere mkpuchi na ụgbụ anwụnta, ime ụlọ ịwụ nke na-ejikọta poselin na pọmpụ chrome site na 50s, ite seramiiki na okooko osisi mpaghara ndị na-eje ozi iji gbochie ụmụ ahụhụ na anwụnta (otu ihe ahụ osisi na-akụ na nzube gburugburu obodo, Javanese paneling ...
N'oge a, ụlọ obibi ọ bụla nwere ntụ oyi na ndị nọ n’elu ụlọ, kichin ejikere, akwa akwa na akwa linen, na Jacuzzi.
N'abalị a na-enwu ọtụtụ oriọna mmanụ ejiri oyibo mee wee na-enwu ma dịka ị pụrụ ịhụ, nsonaazụ ya dị ebube nke na ugbu a amalitere m ịchekwa ego iji gaa ...
Nke a okomoko resotu dị na Thailand ọ na-echekwa ikuku ochie nke mba ahụ nweburu afọ iri gara aga. Ọ bụ njem nke otu awa si Bangkok, mana ụgbọ elu nke onwe. Ọ dị n'ụsọ osimiri nrọ, n'oké ọhịa mmiri ozuzo. Ọ bụ ihe gbasara a mgbagwoju nke ụlọ nkeonwe nwere ọdọ mmiri, electric buggy ka ndi ọbịa gi ghara ije otutu na okomoko, okomoko, okomoko.
Enwere obodo iri na abụọ kpam kpam, otu mara mma karịa nke ọzọ. Fọdụ nwere ọnụ ụlọ ihi ụra isii ma lee anya n'oké osimiri, ndị ọzọ nwere obere ụlọ ihi ụra ma lelee ebe obibi obibi, ndị ọzọ nwere ọnụ ụlọ ihi ụra abụọ ma ọ bụ atọ na ọbụlagodi pere mpe nwere otu ime ụlọ ọ bụ ezie na ọ naghị abawanye ma ọ dịghị ihe na-erughị square mita 403. Onye obula nwere ebe a na-asa ahụ n’ime ụlọ, ebe a na-egwu mmiri, ọdọ mmiri...
Ọrụ ndị a na-enye ebe a dịkwa oke mma. Na-efu efu spa, doro anya, ma ọ na-agbakwunye a n'èzí sinima na n'okpuru kpakpando aha ya bụ Cinema Paradiso nke gunyere a gourmet nri abalị, enwekwara a Observatory, mmiri na ọrụ ndị dị n'okpuru mmiri, iji oke osimiri mara mma nke nwere aja ọcha na mmiri doro anya na mbara igwe na nche anwụ, nkwụ na ọrụ nzuzo naanị nkeji 10 site na ụgbọ mmiri, ohere nke iri nri ebe ọ bụla ịchọrọ n'èzí ma ọ bụ jiri teres, osimiri, ụlọ oriri na ọ ,ụ orụ ma ọ bụ nnukwu nri nri Treepod: nri abalị na treetop!
Ebe a dị na nhazi oge mana etinyem ya nihi na echere m na odi nma n’ihi ebe atumatu ya iwu ya nakwa nihi nche ya. Ọ dịka ụlọ nkwari akụ na ọnwa, Ọ bụghị eziokwu?
Nke rum A makwaara ya site na aha Ndagwurugwu Ọnwa na ọ bụ ndagwurugwu nke dị ihe dịka 60 kilomita n’akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Aqaba, na Jọdan. Na granite na okwute ọ bụ ndagwurugwu kachasị na mba ahụ ma biri n'ime ọtụtụ puku afọ. Emere ụfọdụ ihe nkiri ebe a mara dị ka Lawrence nke Arabia, Red Planet, ihe si Transformers na Prometheus. Okirikiri ala ya dị oke egwu ka ị wee hụ etu ụlọ nkwari akụ a nwere ike isi nọrọ ebe a.
Ihe ịma aka dị ukwuu, na-ejikọ ọzara na ájá ya na nkume iji mee ka okike ọhụrụ n'etiti mmadụ na okike. Echiche nke ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ bụ ịmepụta egwu n'etiti ihe ndagwurugwu na-enye na mkpa ụmụ mmadụ, soro okike mgbe obula enwere ike imeputa ihe pere mpe. Ihe owuwu a ga-adi n’elu ugwu n’ihi na echiche a bu inwe ekele maka echiche nke ozara.
Ihe mgbagwoju gha aghaghi ime ụlọ na ebe obibi, spa, ogige ịzụ ahịa okomoko, ụlọikwuu ndị na-enye gị ohere ịghọta gburugburu, ikuku ikuku na ihe niile nwere ike inye aka mepụta microclimate dị mma maka ndị ọbịa. Studiolọ ọrụ Oppenheim na-elekọta ma, mgbe m hụsịrị ma tụlee ihe oyiyi ahụ, ọ dị m ka ọ ga-abụ ụlọ nkwari akụ mara mma, ihe atụ nke ebe obibi nwere ike ịbụ na Mars, dịka ọmụmaatụ. You nwere ike ichetụ n'echiche ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » ulo » 3 obibi na okomoko ntụrụndụ
Gaa Leta Corrubedo dunes mgbagwoju anya na Galicia